तिथि मेरो पत्रु » 12 सफल एकल लागि सुझाव
कसरी यो एक सफल एकल व्यक्ति हुन महसुस गर्नुहुन्छ? हामी मजा को साधारण लक्षण नजिकै, निडर र चरम आत्म-विश्वास. हामी भविष्यमा थिंक मा संलग्न सम्भावना बढी हुन्छ: जो म अर्को हप्ता संग खाने छ जान्छु? म पेय आज रात को लागि कसले फोन गर्न सक्नुहुन्छ? कसले टापुहरूमा अन्तिम मिनेट यात्रा लागि मलाई सामेल गर्न स्वतन्त्र छ? हामी संसारको-मा-ठूलो संग जडान गर्न जान्छन्: मान्छे संग सबै भन्दा राम्रो मित्र हुनुको, दल र ठाउँमा भन्दा समर्थन को लागि एक साथी वा परिवार भर परेर. बोरिंग बिर्सने, घर एक्लै एकल तिर्नुपरेको; हामी पूर्णतया हाम्रो आफ्नै सामाजिक समुदाय विकास मा लगी छौं. तपाईं जिम मा हामीलाई पाउन छौँ, यो flicks, रेस्टुरेन्ट को, र अनलाइन क्लिक, युग्मन को सन्तुष्टि लागि व्यापार spontaneity र स्वतन्त्रता. अनि यहाँ एक दर्जन सबै एकल आफ्नो निरन्तर सफलता सुनिश्चित गर्न अधिकार हुनुपर्छ भन्ने पर्छ-अमीर हो.
1. यस Outfit. तपाईं थाह, आफ्नो नजरमा रंग बाहिर ल्याउँछ भन्ने लुगा संयोजन, आफ्नो वक्र अझ बढाउँछ, र तपाईं प्रतिरोध पनि पनि राम्रो महसुस तुल्याउँछ आफ्नो सम्पत्ति बन्द देखाउँछ!
2. एक काँध मा रो गर्न. हरेक एक्लो हुन्छ. जान्छ पुरानो मजाक सम्झना, “एक स्त्रीले पूरा गर्न तीन पुरुष आवश्यकता: एक उनको हेरचाह गर्न. एक उसलाई राम्रो हुन. अनि अन्य एक अन्य दुई कुरा गर्न।”
3. कराओके गीत. तपाईं गाउन सक्दैन भने, सिद्ध पिच आवश्यकता छैन एक धुन चयन गर्न पक्का हुन.
4. सफा मजाक.
5. फोहोर मजाक.
6. बचत एन तपाईं जगेडा छ हुनेछ.
7. सुगंधित मोमबत्ती एन एक ठूलो बाटो ताजा र तपाईं र तपाईंको घर आराम गर्न, र हे, सबैलाई मैनबत्तीमा अझ राम्रो देखिन्छ.
8. राम्रो भिडियो / डीभिडी महसुस एन कुरा एक झरीको दिनमा पप गर्न, बिल्ली मृत्यु दिन, दिन तपाईं आफ्नो काम वा गुमाउन आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र संग लडाई छ.
9. प्रतिभा. तपाईं पार्टी केही थप्दै गर्नुपर्छ & किन अरू साथीहरू र अपरिचित मा तपाईं हुनेछ? राम्रो वाइन ल्याउन, एकै चोटि भ्याउने कसरी थाहा, मजाकिया कुराकानी थप्न.
10. व्यक्तित्व & आत्म-व्याख्यात्मक, तर यो खेती गर्न सकिन्छ.
11. एक ठूलो मुस्कान यो स्वतन्त्र छ र तत्काल आकर्षण प्रदान!
12. यो ककटेल. एक पेय मेनु संग fumbling जबकि यो कुराकानी हे स्पार्क्स र बरु अनिश्चित भन्दा चिसो पेय आदेश विश्वस्त खोज्दैन हुनेछ?
ठूलो पार्टी चाल. एक पाम पढाइ वा हस्तलिपि विश्लेषण वर्ग लिनुहोस्. आफ्नो नयाँ पाइने प्रतिभा संग आफ्नो मित्रहरुलाई आनन्दित हुन्छु.
यो भेटघाट चोरी: उदेकलाग्दो Mojito
मेरो मित्र McKinley को quintessential द्वि-तटीय बारटेंडर छ. उहाँले तिनलाई एकल मा सबै भन्दा राम्रो पक्षहरूले Manhattan सान फ्रान्सिस्को को शहरी meccas निम्तो हुन्छ कि एक ककटेल सिद्ध गर्नुपर्छ. तपाईं किन साथीहरूसँग एक घर खुसी घडीमा बारटेंडर खेल छैन, वा आफ्नो हस्ताक्षर पेय रूपमा यस नुस्खा अपनाउने? केही गम्भीर Mojo जगाउन, बच्चा!
McKinley रगत सुन्तला Mojito
2 ओउंस प्रकाश रम
1/2 रगत सुन्तला
को रस 1/2 चूने
1 चम्मच चीनी या सरल सिरप
एक अग्लो प्रयोग, साँघुरो गिलास. रगत सुन्तला वर्गहरु लिनुहोस्,5टकसाल पात, चिनी र चूने रस; ग्लास मा अव्यवस्था. गिलास भर्न बरफ थप्न. यो कोठा मा लागि; राम्रो तरिकाले हलचल. अधिक टकसाल पातहरू एक स्वस्थ क्लब सोडा छप र गार्निश संग बन्द शीर्ष.
गोडा मा एक सानो कमजोर महसुस?